Inwa Wakawanda Waini. Kubatsira Kukudziridza Nyika Zvehupfumi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » Inwa Wakawanda Waini. Kubatsira Kukudziridza Nyika Zvehupfumi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • nhau • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Waini & Midzimu
by Dr. Elinor Garely - akakosha kuTN uye mupepeti mune mukuru, waini.travel
13 min kuverenga
Inwa waini yakawanda
rakanyorwa Dr. Elinor Garely - akakosha kuTN uye mupepeti mune mukuru, waini.travel
Gore raive 2020, uye ini, pakati pevamwe, ndakashandisa US $ 326.6 bhiriyoni pawaini. Kutenda denda, isu vanonwa waini tiri kuwana nyaradzo nekunwa waini yakawanda, tichisundira mari kune inofungidzirwa US $ 434.6 bhiriyoni na2027, inomiririra kuwedzera kwe4.3 muzana pakati pe2020-2027.
IUS inomiririra musika wewaini unofungidzirwa kuUS $ 88 bhiriyoni (2020) nepo China (hupfumi hwechipiri hwepasi rose) ichizosvika US $ 93.5 bhiriyoni na2027.
Japan neCanada vanofungidzirwa kukura pa1.3 muzana uye 3.1 muzana zvichiteerana pakati pe2020-2027.
Germany inogona kukura neanenge 2.2 muzana panguva ino.
Waini yedhiri (kureva, Sauternes / France; Tokaji Aszú / Hungary; Muscat / Italy) iboka riri kukura muUSA, Canada, Japan, China neEurope uye rinotarisirwa kukura 2.8 muzana. Iyi misika yedunhu inomiririra saizi yemusika yeUS $ 43 bhiriyoni (2020) uye inogona kukura kusvika US US $ 53 bhiriyoni panopera 2027 (businesswire.com).
Nepo mamwe mahwindi aifanira kuvhara nekuda kwedenda, chinenge chetatu chakakwanisa kuve nekutengesa zvirinani kupfuura gore rapfuura. Vagadziri vakuru vakaungana uye vakavandudza hunyanzvi hwavo hwekuisa waini mumabhodhoro, mumasherufu, uye mumaoko evatengi.
Zvekutengesa uye zvekuparadzira zvipingaidzo zvaive zvakawanda: Vagadziri vePrimiyamu uye veumbozha vaive vasisina nzvimbo dzekudyira nehotera dzekudyira, dzimba dzekuravira dzainge dzakavharwa, uye vagadziri vakuru vaive mupfupi pane chigadzirwa kuti vadzokere kumagirosa uye kuzvitoro zvemishonga. Mahombekombe ekumadokero akasangana nemoto wakatanga muCalifornia ndokupararira kuburikidza neSouthern Oregon ichiparadza mazana ezviuru ematani emazambiringa mumatunhu aya.
Nhau dzakashata dzakaenzana nenhau dzakanaka neavhareji winery yemhuri yekurekodha internet kutengesa kuwedzera kubva pasi pe1 muzana yezvekutengesa kusvika pamusoro pegumi muzana muzana yekutengesa kwese. Wineries ine hukama hwakanaka hwevatengi vaive vachifona nezvechigadzirwa uye kutengeswa kwefoni kwakava sosi yakakosha yemari nehusiku husiku nekutengesa kwevhidhiyo yedhijitari kuchitsiva zvakawanda zvemuhupenyu hwevanhu.
Izvo zviri kuitika zveindasitiri-zvakakura nyaya hazvina kutsakatika. Sangano rinopesana nedoro rakaenderera, vatano vechidiki vane hutano yakaramba ichigara padivi, uye kusavapo kwekudyara mukutengesa kwedhijitari kwakaramba kuchida kutariswa. Iko kune zvekare kunetsekana nemitengo inowedzera yezvinhu zvakaomeswa, kushaikwa kwemidziyo kwese-iyo-bhodhi, mutengo uye nguva yekuendesa inowedzera yemabhodhoro egirazi, mabhokisi emapuranga, mabhokisi nemapelleti.
Vamwe vatengesi vari kukumbira vatengi kuti vachinje kubva kuhuni kuenda kukadhibhodhi; zvisinei, pane kumanikidza pabepa uye kadhibhodhi kana zvasvika pamazuva ekupedzisira nemitengo. Mune zvimwe zviitiko, zvigadzirwa zvakawedzera ne50 muzana. Vagadziri vegirazi vakadzora kumhanya kwekugadzira mu2020, uye havasi kutarisira kupora kwakasimba chero nguva munguva pfupi. Nemabhoomers arikuregera muhuwandu hwakawanda nekuda kweCovid, kukosha kwekutsvaga varume nevakadzi vadiki kuti vave vatengi vewaini kwave kushoropodza.
Crystal Bhora Kutarisa
Iko kune ramangwana rakajeka reindasitiri yewaini, zvisinei, izvo zviripo zvemusika wekumonyanisa unofanirwa kutariswa. Kubva 2020 uye kuenda kumberi, vanhu vazhinji vachange vachishanda kubva kumba, vatengi vachange vachienda kunogara kumasabhabha uye izvi zvimiro zvinokura zvinoreva kuti kutenga pamhepo kuri kutora vatengi kubva kune dzimwe nzira dziripo. Kutengesa kwemaresitorendi kunodzoka sezvo zvirambidzo zvikaoma zvishoma nevanhu veko vachitsigira kudya kunze; zvisinei, kumirira kudzoka kwevashanyi kunotora moyo murefu. Maresitorendi anogona kugadzirisa patsva sevhisi, achienda kure kubva kune yakazara-sevhisi yakagara modhi kune matsva ekugadzira mari nzira kunyanya kuendesa kumba uye curbside kuenda-kuenda mamodheru; zvisinei, mafomati aya haakurudzire kutengeswa kwedoro zvichikonzera maresitorendi mazhinji achideredza zvigadzirwa zvewaini uye nekugadzirisa zvinopihwa.
Zvitoro zvidiki zvakazvimiririra zvakarohwa zvakaomarara uye ndidzo dzave nzvimbo yekutengesa yewaini inogadzirwa neyemhuri diki wineries. Iwo maresitorendi anokunda aive drive-thru, curbside pickup uye / kana app-based kuodha uye kuendesa kumba (kureva, pizzerias, delis, marori ezvokudya, chikafu chinokurumidza uye zvitoro zvekofi). Mahombekombe makuru ekuvhara maresitoreti aive mumatunhu ane mari yepamusoro yemadhorobha (California, Nevada, Hawaii) uye zvinoenderana neYelp, 61 muzana yezvivharo zveresitorendi zvichave zvechigarire; zvisinei, mari nyowani ingangouya kubva kune vanamuzvinabhizimusi vanozotanga kutanga-kumusoro uye, pamusoro pemakore mana-mashanu-emakore, zvishoma nezvishoma kutsiva mazhinji ezvivakwa zvechigarire zvakavharwa.
Kune tarisiro yekuti hurumende dzemaguta dzicharamba dzichibvumira kuvharwa kwemigwagwa / kuwedzerwa kwekudyira kwekunze kunyangwe kutsvagurudza kweMintel kwakacherechedzwa (Gunyana 2020) kuti vangangoita makumi matanhatu muzana evanodya vaive vasina kugadzikana kudya kunze. Kukurudzira kudya kwemukati, maresitorendi akashandisa yakawanda mari kuisa masisitimu ekuchenesa mweya. Kunyangwe advanced filtration masystem anokurudzira anodya kuti adzokere padama-ne-jowl yekudya chiitiko hachisati chagadziriswa. Munguva pfupi, iyo indasitiri yakanangana nekudya-kuenda-kuenda, kufamba-up sevhisi, uye poto ye curbside.
Vafambi vebhizinesi vanga vari nzvimbo hombe yemubhadharo kumahotera, ndege nendege mumaresitorendi mumaguta makuru uye kutengesa kwewaini mumatunhu aya kungangotadza kuona kukura pasina uyu musika. Mune yakafungidzirwa 2+ gore rekudzora nguva, nzendo dzebhizimusi dzinogona kuve pfupi uye diki nemabhizimusi makuru zviitiko zvebhizimusi zvinouya mumashure.
Sekureva kwaNielsen, inodhura $ 1.02 ye12-ounce inoshandiswa doro padanho, $ 0.88 ye1.45-ounce inoshumira yemweya uye $ 1.51 ye5-ounce yekudururira waini. Izvi zvinoreva kuti waini inokwana makumi maviri neshanu muzana inodhura kushandira uye inotsanangura kuti nei mutengo wakaderera pakushanda chiri chikamu chakajeka chebudiriro yenyaya yemweya. Nediki uye / kana diki yakanaka yekudyira uye yakabatikana bhawa sarudzo, uye kuwedzera kwekutora, zvingangoita kuti doro chinwiwa zvinyorwa zvichadzikiswa pasi uye kurerutswa.
Imwe nzira Kavha
Huwandu hwekukura kwemabhodhoro emamirilita mazana manomwe nemazana mashanu akadonha pamwe nemadiki mapakeji anosanganisira 750-millilita mabhodhoro, Tetra Packs, magaba nemabhodhoro emamililita mazana mashanu. Iwo madiki madiki aive achikura mukuzivikanwa pre-covid uye anogona kutora kugamuchirwa kuenda kumberi.
Kana iro bhodhoro remamirilioni mazana manomwe (750-millilita) risingazivikanwe kwenguva refu - chii chiri kukura? Mafomati mahombe - zvese zviri pamusoro peiyo 1.5-litre chikamu kunyanya iro 2 kana 3-litre boka riri kutora premium bhegi-mubhokisi rine kukura kwe50+ muzana.
Iko kukosha kwekutamba kuri kutarisa kudzikisa kuputira mutengo. Sezvo maboomers paanoenda pamudyandigere, vanozobatana nemamirioniyamu sevatengi vasina mari uye vanochinja mashandisirwo nemari. zvisinei, zvakaoma kunwa waini yakanaka uye kuchinjira kune yakaderera mhando ruzivo ... ndiyo yekutanga 3-litre package inozadzisa ichi chinodiwa. Vechidiki vatengi vane mari vanogona kuwana iyo 3-litre premium bhokisi kutenga kwakanaka uye yemhuri yechidiki inogara pamba kwemasikati uye kudya kwemanheru, iro bhokisi rekutanga rinogona kunge iri mhinduro chaiyo.
Chardonnay inoenderera ichinyanya kuve mhando inozivikanwa; zvisinei, kukura kwehuwandu hwayo kunoenderera kuve yakaipa 2.7 kuderera; merlot inoratidza kuderera kwakanyanya - kungangoita gumi muzana. Ruva racho rakabviswa rose nekukura mwero zvishoma pazasi pe zero.
Mitsvuku tsvuku yakaita kudzoka mu2020 mushure mekudzikira mu2019 uye yakaratidza kukura kwe3.9 muzana. Inotapira, yakasarudzika waini inoratidza kukura kunoyemurika kunyanya neagave-based wines (waini inogadzirwa neakaviriswa bhuruu agave; yakasimbiswa nekubatana ne blanco tequila) iyo inosvibisa iyo waini / mweya midzimu uye inotamba mukurumbira we tequila uye margaritas inoratidza kukura kwe zana muzana. Agave waini yakaderera mune doro kupfuura tequila uye inotamba kune mutengi-ane hutano mutengi achitsvaga mashoma macalorie. Chigadzirwa chacho chinokweverawo muSpanish vatengi vanojairira chigadzirwa icho chatengeswa muMexico. Kuenderera mberi mukuzivikanwa kuri prosecco, sangria uye sauvignon blanc.
Vacheche boomers (70 muzana yemari inoraswa uye 50+ muzana yeupfumi muUS) inoramba iri ivo vatengi vewaini. Parizvino chikamu chimwe chete chezana chinoparadzanisa mashandisiro avo kubva kunaGen X (akazvarwa kutanga-kusvika-pakati-1960s kusvika kunopera kwema1970 kusvika kutanga ma1980) saka havagone kutariswa seboka rinotungamira. Millennials (akazvarwa pakati pa1981 na1996) ndiwo mukana wakakura kwazvo wekukura kwemaindastiri ewaini eUS achangotanga kuratidza kufarira chikamu chewaini. Iri ndiro boka rinoda kufara newaini kuitira kuti indasitiri ione chero huwandu hwekukura hunowanikwa mumakore makumi maviri kubva 20 kusvika 1994.
Mamireniyamu haashande muchikamu chewaini yeprimiyamu kunyange hazvo aine simba mukutenga zvinhu zveumbozha; vangangoita makumi maviri muzana veboka iri vanonwa waini kunyangwe makumi matatu neshanu muzana vachitenga zvinhu zveumbozha. Tsvagiridzo inoratidza kuti mamireniyamu anononoka kusvetukira munzvimbo yekutanga yekutenga waini nekuda kwekutanga kuda doro rehunyanzvi nemweya, mibvunzo nezve nyaya dzehutano dzakabatana nekunwa doro uye kunonoka kumisikidza mabasa, mhuri uye hupfumi zvichienzaniswa nezvizvarwa zvekare.
Indasitiri yewaini inofanirwa kucherechedza kuti vatengi vadiki vanoda zvimwe kubva kumabhureki avanotsigira. Kunyange hazvo chinzvimbo chekutsvaga mabhemera vachida kuratidza hupfumi hwavo uye budiriro, mamireniyoni anofarira kuziviswa nezvevhu, mazuva ekukohwa, pH, winemaker uye zvibodzwa zvewaini - kuti vagone kurira vachiziva pakati pehama nevavanoshanda navo vasingatariswe se "show" kuenda. ”
Wineries anofarira kutora chidiki chemusika chikamu chinofanirwa kutarisa kwavo kushambadzira pazvinhu zvakaita sekugarisana kwevanhu, kuenzana uye kusiyanisa, kudzokororazve mvura, kudzivirira kushandiswa kweglyphosate, kuwana LEED Certification, kushandisa biodynamic uye organic nzira dzekurima. Panguva ino, hapana kana imwe yeruzivo iyi inoonekwa mukutengesa, kushamwaridzana neruzhinji kana kushambadzira kushambadzira kana pamawebhusaiti eWinery.
Mumakore gumi anotevera, indasitiri yewaini ichaita morph kupinda chimwe chinhu chitsva. Kuchave nekuenderera mberi kukura nevatengi veChinese kusanganisira new wineries (kureva, Silver Heights Vineyard / Ningxia Hui Autonomous Region; Nyasha Munda Wemizambiringa / Shanxi Provence; Chateau Changyu AFIP Global / Miyun District, Beijing), uye kuwedzera kushandiswa.
Shanduko yemamiriro ekunze uye kutorwa kwetekinoroji nevarimi, vagadziri vewaini uye vatengesi zvinokanganisa nzira yatinotenga nekunwa waini. Shanduko yemamiriro ekunze irikugadzira matunhu matsva ewaini kumawere akambofungidzirwa kuti haana kukodzera kugadzira waini. Sweden, Norway neNetherlands vari kutanga kugadzira waini-yepasi rose mawaini nekuda kwemamiriro ekudziya.
Kubva pakuona kwetekinoroji, drones uye marobhoti zvinowedzera kuvepo kwavo mumunda wemizambiringa. Iyi tekinoroji nyowani iri kuvandudza nzira yekukura nema sensors muvhu zvinotungamira mukufambira mberi mukutarisira kwevhu uye kubatsira varimi vemazambiringa kuona nguva yakanakisa yekudiridza mizambiringa. Kubhururuka drones kuri kutarisa zviratidzo zvehosha uye kusanaya kwemvura uye marobhoti, nemaoko akaita kunge chigero ari kutenderera munda wemizambiringa kutema mizambiringa.
Vazhinji vanogadzira winhi varikutanga nzira dzekurima dzakaringana nevamwe vachishandisa simba rezuva mumahotera uye vamwe vachichinjisa zvigadzirwa zvekutsvagisa mhinduro mukutsvaga mhinduro dzakagadziriswa dzinozodzikisira kabhoni tsoka.
Sezvo munwi wewaini paanove wepasi rose, ivo havana basa nekutumidzwa kana kuviriswa kana zvimwe hunhu hunosiyanisa waini. Ivo vari kutsvaga zviri nyore kusvinhwa waini inonaka zvakanaka. Muzviitiko zvakawanda, zvigadzirwa zvewaini zviri kuve zvakafanana nemagariro epamaketi ezvitoro uye izvo zvinoreva kuti mavara ewaini anozove anonakidza, hunyanzvi uye akakosha.
Kugadzirisa dambudziko rezvinyengeri zvewaini, tekinoroji iri kugadzira blockchain-based kuvimbiswa uye kuvimba system. Iyo blockchain tekinoroji ndeye yakatemerwa, yakaparadzirwa leja iyo inorekodha kuvapo kweiyo dhijitari aseti iyo inogara uye isingarasike, ichiiita yakakwana senzira yekusimbisa yakanyanya isingawanzo bhodhoro rewaini yakanaka (kureva, Chai Waini Vault).
"Ndipe waini yakawanda kana kuti ndisiye ndoga." - Rumi
© Dr. Elinor Garely. Ichi chinyorwa chekopirisita, kusanganisira mapikicha, chingangodaro chichiburitswa pasina mvumo yakanyorwa kubva kumunyori
Dr. Elinor Garely - akakosha kuTN uye mupepeti mune mukuru, waini.travel
New Yemazuva Ano Contemporary (Moco) Museum inovhura muna ...
Hawaii Inozivisa Nyowani Kuputika kweKuputika
OMG: Ndakabaiwa uye handizive kuti chii...
Veteran Birder Herbert Byaruhanga Mutungamiri mutsva we...
Sandals Resorts Inopemberera New Gordon "Butch" Stewart ...
UNWTO Inorambidza Critical Press paWorld Travel Market
Toronto kuenda kuOrlando nendege paSwoop izvozvi
Makomo anoputika eJapan anoputika achibuda madota mamaira mudenga
Maindasitiri kudzoka: IMEX America inodzosa ...
Middle East Airlines inova Airbus Skywise Hutano ...
New Director weOngorora Minnesota Tourism anonzi
Shanya Carlsbad inozivisa Nyowani Chief Executive Officer
Hawaii zororo rezororo rakwira zvakanyanya ikozvino
IATA inotangisa chitsva lithiamu bhatiri chitupa
60% yevaAmerica havakwanisi kufamba pamusoro pezororo
US, UK, France neGermany vanokurudzira vagari vemo kuti...
Munhu mumwechete akafa, vakati wandei vakakuvara mubhazi reUganda...
18 Inoshamisa Rutsva Hutano Kubatsira kana uchifarira French ...
Jet2 inoraira 15 nyowani A321neo ndege
Wildlife Tourism: Iko Kudiwa Kwenyaya Dzakanaka
Kenza Yemazamu Ekutanga: Verzenio angabatsira sei?
Vols paFlyr uye Vueling kubva kuMilan Bergamo izvozvi
Kudanwa Kwakasimba Kwekusimba pamatanho ese paUNDP...
Portugal inoramba yakavhurika vafambi veUS kunyangwe EU ...
Kufamba Kwekutenda Kunotarisirwa Kukwira Kusvika Mamirioni makumi maviri...
Kubvisa COVID-19 Virus neNew Air Ionizers
Minister Bartlett Vanotungamira kune zvakakosha UNWTO General...
Waini Yakapfuma Italy Hapana Chitsva: Mazambiringa Anoenda Native
Jamaica Inokunda Huru Pa2021 World Travel Awards
COVID Vaccine Syringes Iye zvino Inomhanya Yakaderera: Inogona Kuisa Pangozi ...
Ndege kubva Guatemala City kuenda Mérida paTAG Airlines...
African Tourism Board inoona Costa Rica se ...
China vatongi vanoti kwete kune 'zvisina hutano' ...
Nyowani yeEuropean ski mwaka yakarembera muchiyero
Nzvimbo dzakanakisa dzeguta guru repasi rose reUS...
Sandals® Resorts Inopemberera Makore makumi mana nekutendeuka Kudzoka ...
Minister: Wese weGerman achabayiwa, kuporeswa kana...
American Airlines ku codeshare neIndiGo kuIndia ...
New Mission: Kurudzira Kufamba kuenda kuAfrica maAmerican
China kuita kufambisa data kunze kwenyika inyaya ye...
Hurumende yeUK: nhanho yekutyisidzira kwemagandanga 'yakaoma' ...
7.5 Kudengenyeka kwenyika muNorthern Peru
Chii chitsva muBahamas munaGunyana
Kutsvaga kuCalifornia Surge seUS Kuvhurazve ...
Iwo Akanyanya Kumira Anozivikanwa paWTM 2021
Pfuti Dzakapfurwa paAtlanta International Airport
Heathrow inobatana neMicrosoft kurwisa zvisiri pamutemo ...
Beaches® Resorts Inoda Kugadzira Vanasekuru Vako iyo ...
FTA inokurudzira vamiriri veUnited States kuti vawedzere kupora ...
Vanokwikwidza vezvematongerwo enyika vanogashira $ 2,900 mahara ...
Kukwidza kunotyisa munhandare dzendege kuchamisa mweya ...
Guinea yakadzinga muAfrican Union pamusoro pesimba rehondo
Ndege nyowani kubva kuAntigua kuenda kuBarbados neProvidenciales painterCaribbean Airways izvozvi November 30, 2021
Ndege dzakarongerwa kutanga kushanda kubva svondo raZvita 17, 2021 munguva yemwaka wezororo uye kuita kuti Antigua ive yakabatana nedunhu kupfuura nakare kose.
Mambokadzi akatsiva nemutungamiri mutsva wekutanga November 29, 2021
Sandra Mason ndiye gavhuna-mukuru weBarbados, chinzvimbo chaakagadzwa muna 2017 uye akashanda kweanoda kusvika makore matatu. Achagadzwa seMutungamiriri wekutanga weBarbados mushure mekunge atanga mushandirapamwe muna 2020 wekuita kuti Barbados ive Republic, achizivisa kuti "vaBarbadian vanoda Musoro weBarbadian."
Qatar Airways inogadzirira FIFA Arab Cup Qatar 2021 November 29, 2021
Sezvo iyi ichave yekutanga FIFA Arab Cup, Qatar icharatidza zvakanakisa zvepan-Arab nhabvu.
Minister Bartlett Vanotungamira kune yakakosha UNWTO General Assembly November 29, 2021
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett, akabva pachitsuwa nezuro kuenda kumusangano wechimakumi maviri neina weUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO) General Assembly, uchaitirwa muMadrid, Spain, kubva muna Mbudzi 30 kusvika Zvita 3, 2021.
New Guyana to Barbados ndege dzepakati peCaribbean November 29, 2021
interCaribbean inotarisira kubatanidza Georgetown kune mamwe mapoinzi eCaribbean munguva pfupi iri kutevera kuendesa paCaribbean yakabatana zvechokwadi neinterCaribbean Airways.
WestJet Group inozivisa Mutungamiriri mutsva wenguva pfupi uye CEO November 29, 2021
Harry Taylor akatungamira WestJet yekutanga bond issue yeUS, vakataurirana kutenga Boeing 787 Dreamliner neBoeing MAX ndege, uye yakabatsira mukutengeswa kweWestJet kuOnex.
Mazano Akanakisisa Ekuita Kuti Kune Rwendo Rwakachengeteka uye Runofara November 29, 2021
Unogona kunakidzwa nekushanyira nzvimbo dzausingazivikanwe zvechokwadi; unenge uri mumwe munhu kwevhiki kana maviri. Kuenda kunzvimbo itsva nguva dzose kunounza simba rakawanda uye positivity kwatiri. Zvakafanana nekurapa kunonyanya kudiwa, kutiza matambudziko emazuva ose.
Jamaica Inotemesa Zvirambidzo Zvitsva Zvekufamba paNyika dzemuAfrica November 29, 2021
Jamaica, nekukasika, yakaisa zvirambidzo kune vafambi vanobva kunyika dzinoverengeka dzemuAfrica, zvichitevera kubuda kwemusiyano mutsva wekunetsekana kweSARS-CoV-2, yakatanga kuzivikanwa seB.1.1.529.
Vanhu vana vakaurayiwa, 19 vakakuvara mudutu reIstanbul November 29, 2021
Istanbul yanga ichirwisana nemamiriro ekunze akashata kubva mambakwedza emusi weMuvhuro, nevezvenhau vakazara nemavhidhiyo anotyisa ematenga akacheneswa nemhepo, zvivakwa zvakapwanyika, miti yakadonha, mota dzakapidigura, uye marara ari kubhururuka.
WestJet inodaidza Executive VP mutsva uye Chief Loyalty Officer November 29, 2021
Schuster ane makore anopfuura gumi nemapfumbamwe echiitiko chekuvimbika, kusanganisira makore matanhatu seChief Executive Officer (CEO) weVelocity Frequent Flyer, chirongwa cheVirgin Australia chekuvimbika.
Vaviri vari kutiza kuvharirwa kwechiDutch kutsva vakasungwa vachienda kuSpain November 29, 2021
Netherlands iri kungwara mushure mekunge nyaya dzinopfuura gumi nembiri dzeiyo Omicron COVID-19 musiyano wawanikwa pakati pevatyairi vendege - nyika dzese makumi maviri nenomwe dzeEU dzisati dzabvumirana kurambidza kwenguva rwendo kubva kunyika nomwe dzekumaodzanyemba kweAfrica neChishanu.
Ethiopian Airlines neIDC votangisa kuparura Zambia Airways itsva November 29, 2021
MuEthiopia ane zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana mumubatanidzwa ukuwo Industrial Development Corporation Limited (IDC) ichichengeta zvikamu makumi mashanu neshanu muzana, varidzi vemasheya vakapa mari inosvika mamirioni makumi matatu emadhora mukutanga kwekambani yendege.
COVID-19 hotera yekuvharirwa yakapiswa muAustralia November 29, 2021
Mapurisa akasunga mudzimai ane makore makumi matatu nerimwe okuberekwa, uyo anonzi akabatidza moto pasi pemubhedha wake, achipisa hotera umo iye nevana vake vaviri vakanzi vagare vega kwemazuva gumi nemana.
Vasori Zvino Vakagamuchirwa kuUNWTO General Assembly muMadrid November 29, 2021
Nhume dzeUNWTO dziri kupinda muGeneral Assembly Mbudzi 30- Zvita 2, havafanirwe kutarisira kuona eTN logo yebhuruu nechena uye vatori venhau veTN vachipa makadhi ebhizinesi, nekuti chinyorwa ichi chakarambidzwa kupinda.
Nguva Yekumisa Ndege kuenda kuSouth Africa? Hurukuro Itsva Pamusoro Pekushanya Ichangotanga November 29, 2021
Mutungamiri weBritain, VaBoris Johnson, vataura nemutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, nhasi masikati. Vakakurukura nezvematambudziko akaunzwa pasi rose neiyo COVID-19 musiyano, uye nzira dzekushanda pamwe chete kubata nazvo uye kuvhurazve kufamba kwenyika.